Alia Bhatt Iyo Qoyskeeda Oo Dil Loogu Hanjabay Iyo Talaabada Ay Booliska Qaadeen - Hablaha Media Network
Alia Bhatt Iyo Qoyskeeda Oo Dil Loogu Hanjabay Iyo Talaabada Ay Booliska Qaadeen
HMN:- Atirishada dhalinta yar ee sanadkaan ku guuleesatay atirishada ugu wanaagsan Alia Bhatt iyo qoyskeeda ayaa la sheegay in dil loogu hanjabay.
Alia Bhatt, aabaheed filim sameeye Mahesh Bhatt iyo hooyadeed Soni Razdan ayaa nin aan la garaneyn taleefoon kasoo wacay sidoo kalena dil ugu hanjabay wuxuuna ka dalbaday qoyskaan inay siiyaan 50 Lakh ($75,757).
Hadaba filim sameeye Mahesh Bhatt ayaa tagay saldhiga booliska xaafada Juhu magaalada Mumbai ka tirsan wuxuuna warbixin u gudbiyay hanjabaadii loo geestay isaga iyo qoyskiisa.
Booliska baaritaan badan ayay sameeyeen ugu dambeyntii ninkii aan heebtiisa la aqoonin ee Alia Bhatt iyo qoyskeeda dil ugu hanjabay gacanta ayaa lagu soo dhigay.
Mahesh Bhatt ayaa u mahad celiyay booliska Mumbai dadaalka xoogan oo ay sameeyeen iyo halistii qoyskiisa kusoo fool laheyd sida ay kaga hortageen.
Alia Bhatt oo xayeysiin balaaran u sameeneyso filimkeedii Badrinath Ki Dulhania oo la daawan doono 10-ka bishan Maarso sidoo kalena ay isla jilayaan Varun Dhawan mana aysan ka hadlin halista qoyskeeda soo wajahday marba hadii xal loo helay.